ऐतिहासिक एकता कार्यक्रममा किन आएनन् झलनाथ खनाल ? यस्तो छ भित्री कारण - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
ऐतिहासिक एकता कार्यक्रममा किन आएनन् झलनाथ खनाल ? यस्तो छ भित्री कारण
प्रकाशित मिति: ३ जेष्ठ २०७५, बिहीबार
काठमाडौं। एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता घोषणाको ऐतिहासिक मौका गुमाएका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एकीकृत पार्टीमा तेस्रो वरियता पनि गुमाएका छन् । खनाल तत्कालिन नेकपा एमालेमा दोस्रो वरियतामा थिए । तर, एमाले र माओवादीले एकता गरेर बनेको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ मा उनलाई माधव नेपालले उछिनेका छन् ।
तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुँदा एमालेका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल देखिएनन् । दुवै पार्टीको संयुक्त बैठक र पार्टी एकीकरण घोषणासभामा खनालको खोजी भयो । पार्टीलाई उनी कता छन् भन्ने आधिकारिक जानकारी नै थिएन । पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल निकट स्रोतका अनुसार उनी निजी कामका सिलसिलामा चीनमा छन् । खनाल व्यापारिक कामका सिलसिलामा चीन र मलेसियातर्फ बेला बेलामा जाने गर्छन् । उनका छोरा निर्भिक चित्रकार चिनियाँ कम्पनीसँग मिलेर व्यापार व्यवसायमा छन् ।
भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थलको ठेक्का लिएर काम नगरेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको नेपाली कन्सल्ट्यान्टसमेत हुन् खनालपुत्र निर्भिक । पार्टी एकता संयोजन समितिमा रहेका खनाल जेठको पहिलो साता पार्टी एकीकरण हुने भनिएका बेला ऐतिहासिक अवसर छाडेर व्यापारिक प्रयोजनमा बिदेशिनु लज्जाको विषय बनेको नेकपाका एक नेताले बताए ।
खनालले पार्टी एकताको अवसरमात्र गुमाएनन्, नेकपाको ९ सदस्यीय हाइकमाण्डमा पनि घटुवा भएका छन् ।
यसअघि केपी ओलीपछिको वरियतामा रहेका खनाल एकीकृत पार्टीमा ओली र प्रचण्डपछि तेस्रो वरियतामा रहने थिए । संयोजन समितिमा पनि उनी तेस्रो वरियतामै थिए ।
पार्टी एकता प्रक्रियामा कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको र एकीकरणको ऐतिहासिक क्षणलाई समेत उपेक्षा गरेर निजी काममा हिडेपछि उनको बरियता तल पारिएको स्रोतले जनाएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डपछि दोस्रो बरियतामा तत्कालिन एमालेका बरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल रहनेछन् ।
नेपाल पछिल्लो समय ओली र प्रचण्डबीच अविश्वास हटाउन र पार्टी एकीकरण टुंगो लगाउन सक्रिय भएका थिए । नेकपाको शीर्ष बरियतामा ओली र प्रचण्डको हैसियत समान बरियतामा रहनेछ ।
दोस्रो बरियतामा नेपाल रहनेछन् भने त्यसपछि क्रमशः झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, रामवहादुर थापा बादल र बिष्णु पौडेल रहनेछन् ।
‘विप्लव’ नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीद्धारा नेपाल बन्दको घोषणा (विज्ञप्ती सहित)
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ५ दिने विरोधका कार्यक्रम घोषणा […]
एमाले-माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नयाँ दललाई बल्ल मान्यता, यस्तो राखियो नयाँ नाम
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच मिलेर बनेको नयाँ दललाई निर्वाचन आयोगले बल्ल मान्यता दिएको छ […]
सिंगापुरबाट कहिले फर्कन्छन् प्रचण्ड ? यस्तो छ सीता दाहालको अवस्था
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको […]
महासचिवमा विष्णु पौडेलको इन्ट्रीले तरंग,पदभार ग्रहणमा किन सहभागी भएनन् ईश्वर पोखरेल ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पदभार ग्रहणमा ९ […]
व्यापारको नाममा उपभोक्ता ठग्दै ‘दराज’,छुट भन्दै महँगो मूल्यमा सामान विक्री
कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिह र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबीच भेटवार्ता,किन भेटे ? के हो वास्तविकता !
ठमेलका डान्सबारबाट ३५ बालबालिकाको उद्धार, तीन सञ्चालक पक्राउ
अस्ट्रेलियामा ३५ लाखमा बिक्यो ‘जात्रै जात्रा’